Isitolo esidayisa yonke impahla JS-104 Compound polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Uhlobo lokunciphisa Amanzi) ifektri abakhiqizi | UGaoqiang
I-JS-104 Compound polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Uhlobo lokunciphisa Amanzi)
I-JS-104 iyimikhiqizo yocwaningo nentuthuko yenkampani yethu yakamuva, isebenzisa i-polyether entsha yamuva ye-carbon monomer yakamuva. Lolu hlobo lomkhiqizo lunezinga eliphakeme lokunciphisa amanzi, eliphakeme kune-JS-103, futhi linokusebenza kokuvikela ukugoqa okuphezulu kakhulu.
I-JS-104 iyimikhiqizo yocwaningo nentuthuko yenkampani yethu yakamuva, isebenzisa i-polyether entsha yamuva ye-carbon monomer yakamuva. Lolu hlobo lomkhiqizo lunezinga eliphakeme lokunciphisa amanzi, eliphakeme kune-JS-103, futhi linokusebenza kokuvikela ukugoqa okuphezulu kakhulu. Ilungele ikakhulukazi imvelo enezinto zokwakha ezimbi noma ihlobo elinokushisa okuphezulu. Uma kuqhathaniswa nophuzo olungumama lwe-polycarboxylic acid emakethe, lunganciphisa ukusetshenziswa kotshwala bokuvikelwa komama ngo-20% -40% .Lusetshenziswa kakhulu kukhonkolo onamandla amakhulu ngezidingo eziphezulu, futhi imikhiqizo yalo isetshenziswa kakhulu ujantshi wejubane nomgwaqo wesitimela esinejubane kakhulu, ugesi ophehlwa ngamanzi kanye neminye imisebenzi emikhulu yobunjiniyela ikhiphe ukhonkolo, ukuzihlanganisa okunamandla kakhulu, amandla aphezulu nokukhonkolo okuphezulu nokusebenza kokhonkolo wokuhweba.
I-1 inezinga eliphakeme lokunciphisa amanzi nokusebenza okuphezulu kokuvikela ukuwa, ikakhulukazi kukhonkolo ngokulahleka okukhulu ngesikhathi.
Izinga 2.High ukunciphisa amanzi kanye ongaphakeme ukuhlakazwa velocity.
Ukusebenza kwezindleko okuphelele kuphakeme, ikakhulukazi kufaneleka ehlobo, izinga lokushisa eliphakeme.
uketshezi olukhanyayo ophuzi
Izinga Lokunciphisa Amanzi
inani eligodlile lokugcina (30min）
inani eligodlile lokugcina（60min）
Izinga lokopha kwengcindezi yasemkhathini
Isilinganiso Sokuvuza Kwegazi
Chlorine Ion (Kususelwa Kuqinile)
Okuqukethwe kwe-Alkali (Kususelwa kuma-Solids)
Okuqukethwe kwe-Sodium Sulphate
Isikhathi sokukhomba Okokuqala Concreting
1.ulungele ukhonkolo wamandla okuqala, ukhonkolo osemuva, ukhonkolo we-precast, ukhonkolo owenziwe ngomshini, ukhonkolo wokugeleza, ukhonkolo wokuzibamba, ukhonkolo omkhulu, ukhonkolo osebenza kahle kanye nokhonkolo obhekene nawo, zonke izinhlobo zezakhiwo zezimboni nezomphakathi hlanganisa bese ufaka ukhonkolo wendawo, ikakhulukazi ukhonkolo wentengo osezingeni eliphansi.
Ingasetshenziswa kabanzi kojantshi abanejubane eliphezulu, amandla enuzi, ukonga amanzi namaphrojekthi wamandla kagesi, izitimela ezihamba ngaphansi komhlaba, amabhuloho amakhulu, imigwaqo yezemigwaqo ephezulu, amatheku nezikhumulo zemikhumbi kanye namanye amaphrojekthi amakhulu nezikhiye kazwelonke
Isebenza kuzo zonke izinhlobo zokwakhiwa kwezimboni nezomphakathi kanye nesiteshi sokuxuba ukhonkolo wezohwebo
Lo mkhiqizo uluketshezi olungenambala nolukhanyayo ophuzi. Umthamo onconyiwe njengoba ungezansi: imvamisa, i-10% -40% yotshwala kamama isetshenziselwa ukuxuba ezinye izinto ezincane zokwenza i-ejenti yokwehlisa amanzi.Umthamo we-ejenti yokwehlisa amanzi imvamisa i-1% ~ 3% yesisindo esiphelele sezinto ezisetshenziswayo .
Ngaphambi kokusebenzisa lo mkhiqizo noma ukuguqula uhlobo nenqwaba kasimende nosimende, kuyadingeka ukwenza isivivinyo sokuzivumelanisa nezimo ngosimende nohlanga. Ngokwesivivinyo, qamba inani le-ejenti yokunciphisa amanzi.
3. Lo mkhiqizo ungasetshenziswa wedwa noma uhlanganiswe nophuzo lukamama olukhipha kancane ukunciphisa ukulahleka kokhonkolo (uma kuqhathaniswa ne-JS-101B, inani lokusetshenziswa kotshwala kamama obudonsa kancane kumele lincishiswe); Noma ihlanganiswe nama-auxilaries asebenzayo ukuthola ama-admixtures nge-retarder / amandla okuqala / i-antifreeze / imisebenzi yokupompa. Indlela nezimo zohlelo lokusebenza kufanele zinqunywe ngokuhlola nokuhlanganisa ubuchwepheshe.
Lo mkhiqizo ungasetshenziswa kanye nezinye izinhlobo ze-admixtures njenge-ejenti yamandla yokuqala, i-ejenti yokufaka umoya, i-retarder, njll, futhi kufanele ihlolwe ngaphambi kokusetshenziswa. Ungahlanganisi nokwehlisa amanzi kochungechunge lwe-naphthalene.
Isilinganiso sikakhonkolo kasimende kanye nomxube kufanele sinqunywe ngokuhlolwa, Uma usebenzisa, amanzi axubekile futhi alinganisiwe kufanele engezwe noma afakwe kumxube kakhonkolo ngasikhathi sinye. Ngaphambi kokusebenzisa, ukuhlolwa kokuxuba kufanele kwenziwe ukuqinisekisa ikhwalithi kakhonkolo.
6. Lapho kunezixhumi ezisebenzayo ezifana ne-fly ash ne-slag esilinganisweni sikakhonkolo, inani le-ejenti enciphisa amanzi kufanele ibalwe njengenani eliphelele lezinto ezi-cementitious.
Ukupakisha & Ukulethwa
Iphakheji: 220kgs / isigubhu, 24.5 amathani / Flexitank, 1000kg / IBC noma uma uceliwe
Isitoreji: Kugcinwe endaweni yokugcina umoya eyomile eyi-2-35℃ futhi ihlanganiswe kahle, ngaphandle kokuvulwa, impilo yeshalofu ingunyaka owodwa. Vikela ekukhanyeni kwelanga ngqo nasemakhazeni
Imininingwane yokuphepha eningiliziwe, sicela uhlole Ishidi Lokuphepha Lokuphepha.
Langaphambilini I-JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (uhlobo lokunciphisa amanzi aphezulu)
Olandelayo: I-BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Uhlobo olulondolozayo oluphezulu)
I-Pce Polycarboxylate Superplasticizer
I-Polycarboxylate Ether Superplasticizer Pce
I-Polycarboxylate Superplasticizer Liquid